Tag: sudan | Sagal Radio Services
Madaxweynaha Koofurta Sudan oo ogolaatay inuu saxiixo heshiiska nabadeed
Madaxweynaha Koofurta Sudan Salva Kiir ayaa ogolaaday inuu saxiixo heshiiska nabadeed ee dhigayay in la soo afjaro colaada dalkaas ka jirta.
Wada hadalada dhinacyada isku haya South Sudan oo maanta dib uga bilaabanaya Addis Ababa
Sagal Radio Services • News Report • December 17, 2014
Wada hadaladii u dhaxeeyay dhinacyada isku hayay colaada dalka South Sudan ayaa maanta la filayaa inuu dib uga furmo magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, labo maalin kadib markii uu sanad jirsaday dagaaladii ka bilowday dalkaas.
Heshiiskii xabad joojinta Koofurta Sudan oo qarka u saaran inuu bur buro
Sagal Radio Services • News Report • May 12, 2014
Dowladda iyo Mucaaradka Koofurta Sudan ayaa midba midka kale waxaa uu ku eedeynayaa inuu jebiyay heshiiskii xabad joojinta ee labada dhinac ku kala saxiixdeen magaalada Addis Ababa maalintii jimcihii.
Mareykanka oo ugu baaqay wadamada bariga Afrika in si deg deg ah ciidamo ugu diraan Koofurta Sudan
Dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday dalalka Bariga Afrika in si deg deg ah ciidamo ku filan ugu diraan dalka Koofurta Sudan, si loo soo afjaro colaadaha ka socda dalkaas oo galay lix bilood.
Magaalada Juba ee Dalka Koofurta Sudan oo mar kale Dagaal ka qarxay
Iska hor imaad ayaa dib ugu bilowday caasimada Juba ee Koofurta Sudan, halkaasoo dhamaadkii sanadkii hore uu ka dhacay isku daygii la doonayay in lagu afgambiyo Madaxweynaha Sudan Salva Kiir, kaasoo horseeday dagaalo ku baaha gobolada.
Dawladaha Somaliya iyo Sudan oo heshiis iskaashi ah kala saxiixday (Daawo Sawirada)
Sagal Radio Services • News Report • February 20, 2014
Gudoomiyaha Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo wafdi uu hogaaminayo ay socdaal shaqo ku joogaan dalka Iran ayaa heshiis iskaashi kula saxiixday magaalada Tehran dhigiisa Dalka Sudan Dr Al-Faatix Cizadiin Mansoor.
Safiirka Somalia u fadhiya K/Sudan oo sheegay inay jiraan Soomaali ku xayiran gobolada dalkaas
Sagal Radio Services • News Report • January 13, 2014
Safiirka Soomaaliya u fadhiya Koofurta Sudan Amb. C/raxmaan Nuur Maxamed (Diinaari) ayaa sheegay inay wali jiraan Muwaadiniin Soomaaliyeed oo wali ku xayiran qaar ka mid ah gobolada dalkaas, iyadoo ay ka socdaan dagaalo u dhaxeeya dhinacyada iska soo horjeeda.
Ciidamada Koofurta Sudan oo dib u qabsaday magaalada hodanka ku ah Saliida ee Bentiu
Sagal Radio Services • News Report • January 11, 2014
Ciidamada dowladda ee Koofurta Sudan ayaa dib u qabsaday magaalada hodanka ku ah Saliida ee Bentiu, halkaasoo ka mid aheyd magaalooyinka ay gacanta ku dhigeen kooxaha mucaaradka.
Soomaalida Ku Nool Suudaanta Koonfureed Oo Iska Diiwaan Galinaya Safaardda Dalkaasi Si ay Ugu Soo Laabtaan Dalka
Ka dib markii duulimaadkii ugu horeeyay oo sida in ka badan 100 ruux oo Soomaali ah ay ka soo dageen magaalada Muqdisho, kuwaasi oo ka mid ah dadkii rabshaduhu ay ku qabsadeen dalka Suudaanta Koonfureed, islamarkaana Dowladda Soomaaliya ay ku guuleysatay in laga soo bad baadiyo dadkaasi rabshadaha ka taagan dalkaasi si waxyeelo aanay uga soo gaarin qalalaasahaasi, ayaa safaardda Soomaaliya waxa ay sheegtay in dad badan oo Soomaali ah ay iska soo diiwaan galinayaan safaaradda si dalkooda hooyo ay ugu soo noqdaan.